Ku dhawaad 30 sano, barnaamijka Mississippi River wuxuu ku maalgeliyey soo celinta tayada biyaha iyo adkeysiga biyo-mareenkan weyn ee Mareykanka.
Bishii Agoosto ee 2019, ka dib markii si caqli leh looga dooday, ayaa agaasimeyaashii guddiga McKnight ay go’aansadeen dib ugu noqo kaalinteeda iyo qorrax dhaca qoraxda barnaamijka Wabiga Mississippi.
Deeqihii hore ee la bixiyo waxaaay sii jiri doonaan ilaa waqtigooda la qorsheeyay. Hase yeeshee, innagu aqbali mayno soo-jeedinno cusub oo ku saabsan maalgelinta.
The la ballaariyey barnaamijka Cimilada & Tamarta Midwest iyo soo bixitaanku barnaamijku wuxuu diiradda saaray beelaha sinnaanta wuxuu ku dhawaaqi doonaa tilmaamaha cusub deyrta 2020. Deeq bixiyeyaasha webiga ee ku habboon tilmaamaha cusub ayaa dalban kara maalgelin cusub.
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxaa ka go'an inay si masuuliyadi ku jirto hoos u dhigto deeqdeena iyo la shaqeynta deeq bixiyayaasha si loo yareeyo kala guurka. Waxaan kaaga mahadcelineynaa iskaashigaaga iyo ku qanacsanaanta horumarka la taaban karo ee dhinaca caafimaadka iyo adkaysiga badan ee Wabiga Mississippi.
Goolka Barnaamijka: Dib u soo celi tayada biyaha iyo adkeysiga Wabiga Mississippi.
Wabiga Mississippi waxaa lagu dhajiyay dhammaan dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo bulshada ee Minnesota iyo Midwest. Ku dhowaad kala badh waddanku wuxuu ku xiran yahay webiga weyn iyo kaniisadaha.
Dadka asaliga ah ayaa ahaa kuwa ugu horreeya ee yimaada Wabiga Mississippi. Kumanaan sanadood, tuulooyinkoodii ayaa dejiyey wabiyada, iyada oo ay ku tiirsanayeen biyaha kalluumeysiga, beeraha, iyo gaadiidka.
Muddo qarniyo ah, dhaqamada ayaa ku soo batay webiga. Waxay bixisaa biyo nadiif ah malaayiin qof oo ku nool Mareykanka, iyo sidoo kale jidadka marinka iyo fursadaha madadaalada. Wareegga Wabiga Mississippi waxaa ku jira qaar ka mid ah dhul-beereedka ugu caansan dhulka, waxayna soo saartaa 92 boqolkiiba wax soo-saarka beeraha ee Maraykanka.
Wabiga, oo ay weheliso duufaantooda iyo goobaha qoyaanka, waxay sidoo kale marti galiyaan shabakad ballaaran oo kaabayaasha cagaaran, joogteynta adeegyada muhiimka ah ee deegaanka sida maareynta biyaha, biyaha biyaha ku dhejisan, iyo degaannada kalluunka iyo duur joogta. Beeraha iyo isticmaalka kale ee dhulka waa darawalada ugu muhiimsan ee adeegyadan deegaanka iyo guud ahaan caafimaadka webiga.
Laakiin faa'iidooyinka Wabiga Mississippi looma qaybin. Jaaliyadaha qaarkood waxay ka fajiciyeen xayawaanka iyo fursadaha madadaalada halka kuwa kale ay ka soo horjeedaan sunta warshadaha, biyo nadiif ah, iyo daadad sii xumaatay.
Waxaan dooneynaa inaan dib u soo celinno Wabiga Mississippi iyo inaan hubinno nadiifinta, nidaamyada webiyada ee xasilooni loogu talagalay bulshooyinka ku yaala bartamaha Maraykanka.
Mississippi River News, Fikradaha, iyo Khayraadka